वेबसाइट स्पीड र वेबसाइट पदोन्नति सुधार गर्न छवि अनुकूलन - Semalt विशेषज्ञ
छविहरू वेबको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू मध्ये एक हो, पाठ्यक्रमको पाठ्य निम्नानुसार। छवि नभएको वेबसाइट सामान्यतया बोरिंग र सर्फर्सलाई कम प्रेरणादायक हुन्छ, छविहरू भएको साइट भन्दा।
साथै, त्यहाँ केहि क्षेत्रहरू छन् जहाँ छविहरूको प्रयोग अनिवार्य छ र साईटलाई औचित्य बनाउन पनि आवश्यक छ।
अनलाइन वाणिज्य साइटहरू
पोर्टफोलियो साइटहरू र कार्यहरूको प्रदर्शन
छवि साइटहरू जहाँ फोटोहरू "उत्पाद" हुन् - उदाहरणका लागि, विवाहको पोशाक, घटना फोटोग्राफी, आदि।
सामाजिक नेटवर्क - अधिक र अधिक अध्ययन तथ्यहरु लाई सूचित गर्दैछ कि फोटो सहितको पोष्टले धेरै अधिक टिप्पणी र साझेदारी प्राप्त गर्दछ, फोटो बिना पोष्ट र स्थितिको तुलनामा पर्याप्त प्रतिशतले।
गुगल छवि पदोन्नति: छविहरू ठीकसँग प्रयोग गर्दै
के तपाईंले फोटो साइट/छवि रिपोजिटरीबाट फोटोहरू लगानी गर्नुभयो वा खरीद गर्नुभयो, वा तपाईंले आफैं बढाउनुभयो र फोटो पनि खिच्नुभयो? तपाइँले एसईओ उद्देश्यको लागि तिनीहरूलाई अधिकतम पार्नु पर्छ!
गुगल छवि पदोन्नति एक हो वेबसाइट यातायात बढाउनको लागि उत्तम तरिकाहरू केहि क्षेत्रहरुमा - विशेष गरी ती दृश्य दृश्यमा केन्द्रित छन्।
माथिको बावजुद, छविहरूको अनुचित प्रयोगले साइटलाई राम्रो भन्दा अधिक हानि पुर्‍याउन सक्छ र बडो महत्त्वको प्रचार प्रसारलाई पनि। मा छविहरूको प्रयोगको बारेमा कुरा गर्दा जैविक पदोन्नति को संदर्भ, केहि नियमहरू दिमागमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, छविहरूको अनुचित प्रयोगले साइटको गतिलाई बिगार्न सक्छ, र त्यसैले पदोन्नतिमा महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ।
मूल छवि अनुकूलन नियम:
१. तस्विरको वजन र आयाम
तस्विरहरु लाई अनलाइन बढावा दिनको लागी एक महत्वपूर्ण प्यारामिटर - छविको तौल।
एक तर्फ, हामी उच्च-गुणहरूको छविहरू प्रयोग गर्न चाहन्छौं तर अर्कोतर्फ, यो साइट गति, प्रयोगकर्ता अनुभव, र पदोन्नतीको खर्चमा आउँदैन। सिफारिस जहिले पनि "अप्टिमाइज" (शब्द अप्टिमाइजेसनबाट) छविहरू अधिकतम सम्भव भएसम्म, गुणवत्ताबाट उल्लेखनीय विपरित नगरी। यो गर्न, निम्न नियमहरू पालना गर्नुहोस्:
विभिन्न परिस्थितिहरूको लागि उपयुक्त ढाँचा प्रयोग गर्दै (jpg, png, gif, र अधिक) - तलका ढाँचाहरूको विभिन्न प्रकारहरूमा पूर्ण विवरण।
महत्वपूर्ण - साइटमा प्रत्येक छविको आयामहरू सेट गर्दै - छविको वास्तविक (भौतिक) आकार भन्दा सानो छवि प्रदर्शन गर्नबाट बच्नुहोस्, सकेसम्म अनावश्यक श्रोतहरू खेर फाल्ने छैन। ठूला र अधिक मोबाइल साइट, अधिक महत्व।
उत्तरदायी मिलान सुनिश्चित गर्दै - यदि तपाईं वर्डप्रेस र एक आधुनिक टेम्प्लेटको साथ काम गर्नुहुन्छ भने संभावना छ कि तपाईंले यो कुना बन्द गर्नुभयो। तर यदि होईन भने, यो सधैं सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि साइटमा छविहरू, विशेष गरी छविहरू जुन भित्र पोष्ट भित्र छन्, उत्तरदायी छन् र राम्रोसँग मोबाइल उपकरणहरू, ट्याब्लेटहरू, इत्यादिमा प्रदर्शित छन्।
छविको वजनको अधिकतम कम्प्रेशनले गुणस्तरको ह्रास नगरीकन (उपकरण र विस्तारहरूमा विस्तार गर्नको लागि - यसैले तल)।
फोटोका लागि सिफारिश तौल
लगभग कुनै पनि तस्विर एक डिग्री वा अर्कोमा कम्प्रेसर गर्न सकिन्छ त्यसैले यो केवल वास्तविक आयाम मात्र प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ जुन साइटमा शारीरिक रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ र सकेसम्म छविहरूको तौल घटाउनुहोस्। यो कुनै पनि साइटको लागि सत्य हो। तर विशेष गरी छविहरूको धेरै संग साइटहरूको लागि। त्यहाँ कुनै नियम छैन जुन सबै केसमा सत्य हो, तर यो तस्बिरको वजन 70०-80० के भन्दा बढी नहुने कुराको लागि यो सुझाव दिइन्छ कि यो विशेष महत्वको ग्यालरी/स्लाइडर छवि नभएसम्म।
२. छविका लागि उपयुक्त नाम छनौट गर्नुहोस्
छविहरूको लागि गुगल खोजीमा, क्वेरीसँग सम्बन्धित छवि प्रदर्शन गर्न धेरै प्यारामिटरहरू ध्यानमा राखिएका छन्। ती मध्ये एक फाईल नाम हो। अर्को सेकेन्ड खर्च गर्न र छविलाई एक नाम दिन सिफारिस गरिन्छ जसले छविमा तपाईले के देख्नुहुन्छ वर्णन गर्दछ। यो अंग्रेजीमा फाईलको नाम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ र मध्य रेखाहरू प्रयोग गर्नुहोस् खाली ठाउँहरू होइन। कारण यो हो कि गुगलले मध्यम ड्यासहरूसँग राम्रोसँग प्रतिलिपि गर्दछ।
चित्रको लागि नराम्रो नामका उदाहरणहरू:
छविको लागि राम्रो नामको उदाहरण:
तपाईं सोच लागेकाहरूका लागि - हो, Google लाई अन्य भाषाहरूको लागि अंग्रेजी छवि नामहरू कसरी व्यवहार गर्ने भनेर थाहा छ। यो खोज परिणामहरु र खोज परिणामहरुमा अनुवादित शब्दहरू हाइलाइट अनुवाद कसरी गर्ने थाहा छ।
AL. छविमा ALT
वैकल्पिक टैग, जुन वैकल्पिकको संक्षिप्त रूप हो, एक प्यारामिटर हो जुन छवि वर्णन गर्दछ। Alt ट्याग प्रत्येक छविको लागि व्यक्तिगत रूपमा व्यवस्थापन प्रणाली/HTML कोड भित्र परिभाषित हुन्छ, र यसको मूल कार्य भनेको अन्धा र अशक्तता भएका मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्नु हो जसले विशेष सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ जुन यी ट्यागहरूलाई स्क्यान गर्दछ र के पढ्छ भनेर पढ्छ।
प्राविधिक रूपमा कोडमा, यस्तो देखिन्छ:
वेबसाइट पहुँचको सर्तमा ट्यागको महत्त्वको पछाडि, यसले खोजी ईन्जिनहरूमा पनि महत्त्व राख्छ। Alt ट्यागले खोजी ईन्जिनहरूलाई छविको विषय के हो बुझ्न गर्न मद्दत गर्दछ (फाइल नाम, यसमा रहेको पृष्ठको प्रस context्ग, आदि।) र यसले प्राकृतिक रूपमा Google मा छवि खोजीलाई पनि प्रभाव पार्दछ।
साथै, Alt ट्याग सबै चीजको लागि पृष्ठमा अनुकूलनको अंश हो। साथै, जब त्यहाँ छविबाट बाहिरि लिंक आउँदछ, Alt ट्यागले छविको लागि पाठ ए an्कर ("एch्कर पाठ") को एक प्रकारको रूपमा कार्य गर्दछ।
म कसरी जाँच गर्ने कि यदि छविमा ALT ट्याग छ?
धेरै मार्गहरू छन्:
सम्पूर्ण तरिका - माउसको साथ छविमा क्लिक गर्नुहोस् -> दायाँ क्लिक -> एक तत्व जाँच्नुहोस् (शब्दहरू विभिन्न ब्राउजरहरूमा भिन्न हुन्छन्)।
हामी <img> कमाण्ड भित्र ट्याग हेर्न चाहन्छौं जुन पहिले देखाइएको छ।
वेब विकासकर्ता भनिने प्लगइन प्रयोग गर्नुहोस् (अन्य धेरै कार्यहरूको लागि महान)। विस्तारले हामीलाई अनुमति दिन्छ, बटनको क्लिकको साथ, छविहरू विशेष पृष्ठमा भएका सम्पूर्ण Alt ट्यागहरू प्रदर्शन गर्न।
भ्यागुता चिच्याउँदै - जब हामी साइटमा छविहरूको पूर्ण स्क्यान गर्न चाहन्छौं तब उपयुक्त एक भ्यागुता प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रक्रिया स्क्यान गर्न URL प्रविष्ट गर्न छ र छवि ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यहाँ हामी साइटमा छविहरूको सूची देख्दछौं, जुन धेरै प्यारामिटरहरू द्वारा क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ:
१००kb भन्दा बढी तौल
ALT ट्याग बिना छवि
ALT ट्यागको साथ छविहरू जुन १०० भन्दा बढी वर्णहरू समावेश गर्दछ (र तपाईंले सायद तिनीहरूलाई थोरै छोटा गर्नुपर्दछ)
त्यहाँ पाठ्यक्रमका अधिक तरिकाहरू र विभिन्न प्रकारका अधिक प्लगइनहरू छन्, तर यस्तो देखिन्छ कि मैले विषयलाई यहाँ एक पोइन्ट आवश्यकता, प्रति पृष्ठ, र साइटको व्यापक समीक्षाको आधारमा कभर गरेको छु।
गुगल छवि पदोन्नति - ALT ट्यागहरू अनुकूलन गर्न सुझावहरू
तपाईंले कुञ्जी शब्दहरू जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, तर तपाईंले चित्रमा देख्नुहुने वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि सम्भव छ भने छवि वर्णन + प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू संयोजन गर्न प्राकृतिक रूपमा खडा हुन - के राम्रो छ।
वर्णनलाई बढाइचढाइ गर्न आवश्यक छैन, २- word शब्द Alt ट्याग पर्याप्त भन्दा बढि छ।
यो सिफारिश गरिन्छ कि छवि को लागी Alt ट्याग र शीर्षक ट्याग समान छैन।
वाणिज्य साइटहरूका लागि - यदि उत्पादनसँग मोडेल नम्बर छ भने, यसलाई Alt ट्यागमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ (गुगल छवि खोजीहरूमा देखा पर्न)।
वालपेपर/सजावटी छविहरूको लागि अल्टहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन - यो पनि सिफारिश गरिएको छैन कि गुगलले शंका गरेन कि तपाईं अधिक अनुकूलित गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ।
An. छविको लागि शीर्षक ट्याग
छवि क्याप्शन, वा क्याप्सन, एक प्रकारको टूलटिप हो जुन छविमा माउसलाई सार्दा देख्न सकिन्छ। धेरै व्यक्ति तिनीहरूलाई ALT ट्यागको साथ भ्रमित गर्दछ।
छवि शीर्षकहरू प्रासंगिकता र छविको बिषयको अर्को सication्केत हो जुन Google लाई छवि के कुरा गरिरहेको छ भनि बुझ्न र यसको छवि खोजी र improve्कि improve सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। एएलटी ट्यागको विपरित, एक शीर्षक ट्याग सामान्यतया अधिक वर्णनात्मक र अलि लामो हुन्छ, र यसको उद्देश्य सर्फरलाई वर्णन गर्नु हो कि छविमा के देखिएको छ र/वा छविमा क्लिक गरिए पछि के हुन्छ। समाचार साइटहरूले यस ट्यागको लगातार प्रयोग गर्दछ।
यो कोडमा यस्तो देखिन्छ:
<img वर्ग="alignnone wp-image-1323 आकार पूर्ण" शीर्षक="उदाहरण शीर्षक छवि">
Image. छवि प्रकार र फाईल विस्तार
छविहरू अनलाइन प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ धेरै सामान्य ढाँचाहरू छन्। म तिनीहरुको संक्षिप्त विस्तार गर्दछु।
JPEG/JPG - वेबमा छविहरूको लागि सब भन्दा पुरानो र सम्भवत धेरै सामान्य ढाँचा। JPG ढाँचाको फाइदा तुलनात्मक रूपमा उच्च गुणवत्ता र कम तौल छविहरू प्रदर्शन गर्ने क्षमता हो। JPG छविहरू अस्पष्टता समर्थन गर्दैन।
GIF - GIF ढाँचा पनि हामी संग केहि समय को लागी गरीएको थियो, त्यस दिनबाट शुरू गर्दै जब त्यहाँ अझै पनि फ्लपी डिस्कहरू थिए। GIFs ले केवल २66 रंगहरू मात्र समर्थन गर्दछ, त्यसैले तिनीहरू कम गुणस्तरको छवि ढाँचा हुन् र मुख्य रूपमा आइकन वा विभिन्न प्रकारको सजावटको रूपमा प्रयोगको उद्देश्यले हो। साथै, GIP ढाँचा एनिमेसन समर्थन गर्दछ, र फेसबुक पनि भर्खर फिड मा यो प्रारूप समर्थन शुरू भयो।
तल लाइन - gifs छवि प्रदर्शन गर्नका लागि होईन, विशेष गरी जब यो छवि गुणवत्तामा आउँदछ, तर सरल आईकनहरू, एनिमेशनहरू, र तत्वहरूको लागि।
PNG - यो समूहमा (तुलनात्मक) नयाँ ढाँचा हो। PNG फाईलहरूको मुख्य फाइदाहरू - JPG र GIF तुलनामा उच्च गुणस्तर, र पारदर्शिताका लागि समर्थन। PNG फाईलहरू २ ढाँचामा विभाजित गरिएको छ - PNG24 जुन राम्रो गुणस्तर हो (र तदनुसार तस्विरको वजन) र PNG8 जुन ती सबैमा सबैभन्दा किफायती हो।
त्यहाँ अन्य धेरै छवि प्रारूपहरू उपलब्ध छन्, तर ती वेबसाइटहरूमा प्रयोगको लागि कम सान्दर्भिक छन्।
टिप - फोटोशप प्रयोग गर्नेहरूका लागि, म सँधै तस्विर तौलहरू तुलना गर्न सिफारिस गर्दछु बचत गर्नुहोस् वेब र उपकरणहरूका लागि विभिन्न ढाँचाहरूको बीचमा (फाइल बचत गर्नु अघि छवि तौलको पूर्वावलोकन छ)।
छवि स्वरूपहरू चयन गर्नका लागि थम्बको नियमहरू
धेरै जसो केसहरूमा, JPG ढाँचाले कार्य गर्दछ। JPG छविहरूले उच्च गुणवत्ता र कम फाइल तौलको लागि अनुमति दिन्छ।
ठूला फाईलहरूमा GIFs प्रयोग नगर्नुहोस् जुन धेरै विवरणहरू समावेश गर्दछ - फाईलको तौल ठूलो हुनेछ। ढाँचा यसको लागि डिजाइन गरिएको छैन र साना र साधारण तत्वहरूको साथ प्रयोगको लागि अधिक उपयुक्त छ।
यदि पारदर्शिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने - PNG ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस्। छविहरूको वजन कम गर्न सम्भव भएसम्म PNG24 र PNG8 तुलना गर्न यो सल्लाह दिइन्छ।
Th. थम्बनेलको उचित प्रयोग
थम्बनेलहरू (पूर्वावलोकनहरू) केहि साइटहरूको महत्त्वपूर्ण र महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू हुन् - विशेष गरी ग्यालरीमा आधारित साइटहरू र वाणिज्य साइटहरू। थम्बनेलहरू ("थम्बनेल" गुगल ट्रान्सलेटâ by ¦ द्वारा) एकतर्फ महान् हुन सक्दछ तर अर्कोतर्फ साइट र प्रयोगकर्ता अनुभवलाई तोडफोड गर्दछ।
यी छविहरू प्रयोग गर्नमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एक उचित गुणस्तर र वजन सकेसम्म कम राख्नु हो। ठूला वाणिज्य साइटहरूमा जुन कोटी पृष्ठहरू र उत्पाद पूर्वावलोकनहरू प्रदर्शन गर्न थम्बनेलहरूमा निर्भर गर्दछ, यो तथ्य विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। के तपाईंलाई थाहा छ साइट लोड गर्न ढिलाइको हरेक सेकेन्डमा अमेजन $ १.6 बिलियन डलर खर्च हुन्छ? त्यस्ता साइटहरूमा अधिक लोड हुने समय छविहरू हुन्।
यो सत्य हो कि हामी मध्ये धेरैले केवल यो विशालताको साइट भएको सपना मात्र देख्न सक्छौं। तर तपाइँलाई थाहा छ - ठूला परिवर्तनहरू तलबाट सुरू हुन्छन् र सानोबाट सुरू हुन्छन्। हामी जति चाँडो राम्रोसँग सम्बोधन गर्दछौं।
थम्बनेलहरू सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सुझावहरू
थम्बनेलको लागि थम्बनेल र उत्पाद पृष्ठमा यसको लागि ठूलो छवि बनाउने सिफारिस गरिएको छ। थम्बनेलको रूपमा ठूलो तस्वीर प्रयोग नगर्नुहोस्! यसले साइटको लोड धेरै पटक लोड गर्दछ, विशेष गरी जब त्यहाँ एक पृष्ठमा धेरै थम्बनेलहरू छन्। विभिन्न CMS प्रणालीहरूमा, तपाईं यस मुद्दाबाट स्वत: मुक्त हुनुहुनेछ।
जब यो छवि अनुकूलन नियमहरूको कुरा आउँदछ, ठूला छविहरूमा थम्बनेलहरू भन्दा बढी लगानी गर्न सल्लाह दिइन्छ। उदाहरण को लागी - छवि साइटम्याप (तल विस्तार) मा थम्बनेलहरु समावेश नगर्नुहोस्, केहि केसहरुमा उनीहरुको लागी ALT ट्याग पनि सेट गर्दैन। महत्वाकांक्षा यो हो कि गुगलले ठूला चित्रहरूलाई थम्बनेलको खर्चमा अनुक्रमणिका गर्नेछ र अन्य तरिकाले पनि गर्दैन।
थम्बनेलमा छवि शीर्षक सेट गर्न सिफारिश गरिन्छ, जसले उत्पादनलाई केहि शब्दहरूमा वर्णन गर्दछ र सामान्यतया सर्फरले छविमा क्लिक गरिसकेपछि के देखिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ।
यदि प्रत्येक उत्पादन कोटि पृष्ठमा धेरै उत्पादनहरू छन् (30० भन्दा बढि भन्नुहोस्), यो सुस्त लोड स्क्रिप्ट प्रयोग गर्न सिफारिश गरिन्छ जुन छविहरू लोड गर्दछ जब सर्फर स्क्रोल गर्दछ तिनीहरू जहाँ छन्।
Pping. र्यापिंग पाठको प्रयोग
सामान्यतया, छविहरू पाठ सेवा दिन आउँछ न कि अन्य तरिकाहरूमा। तर जहाँसम्म छवि अप्टिमाइजेसन र गुगल छवि पदोन्नति सम्बन्धित छ, र यदि साइट छविहरूमा आधारित नेट हो भने, यो पाठ्यहरूको कुरालाई बेवास्ता नगर्दा यो सार्थक छ, यदि यो आधारभूत सामग्री भए पनि।
सफा र कम से कम एक दृश्य सम्भव भएसम्म राख्नको लागि (उदाहरणका लागि फोटोग्राफरको पोर्टफोलियो वेबसाइटमा), उनीहरूले सिफारिश गर्दछ कि उसले कम्तिमा एउटा छवि भएको प्रत्येक पृष्ठमा निम्न परिभाषा गर्नुहोस्:
H1 छविको विषय अनुसार
छोटो वर्णन (१०-१० शब्द पनि कुनै चीज भन्दा राम्रो छ) छविमा प्राथमिकताका प्रासंगिक कुञ्जी शब्द वा दुईसँग
शीर्षक र वर्णन पाठ्यक्रम प्रासंगिक छन् (यदि यो भौतिक पृष्ठ हो र ग्यालरीबाट पप अप हुने छवि होइन भने)।
Alt र फोटो शीर्षक - यस मामला मा उच्च सिफारिश।
Photos. फोटोका लागि साइटम्याप
छवि साइटम्याप (छवि-साइटमैप.एक्सएमएल) गुगललाई साइटमा हाम्रो छविहरू अझ राम्रोसँग पढ्न र अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्दछ। मानक XML साइटम्यापको समान, चित्रहरूको साइटम्याप साइट मानचित्रको क्षेत्रमा खोजी कन्सोल प्रयोग गरेर बुझाउन सकिन्छ।
खोज कन्सोलमा एक साइटम्याप जोड्नुहोस्
छविहरूको साइटम्याप विशेष गरी उपयोगी छ जब स्क्रिप्टहरू र विभिन्न प्रभावहरूको साथ सबै प्रकारका ग्यालरीहरू प्रयोग गर्दा - जुन Google लाई परम्परागत रूपमा स्क्यान गर्न गाह्रो हुन्छ।
छविहरूका साइटम्यापहरू प्रयोग गर्न त्यहाँ केही प्यारामिटरहरू छन्।
कसरी साइटम्याप सिर्जना गर्ने?
WordPress - सामान्य रूपमा यदि तपाईं WordPress मा काम गर्नुहुन्छ, तपाईंको जीवन सजिलो छ। उदिनरा सबै छवि साइटम्याप प्लगइनले तपाईंको लागि कुना बन्द गर्दछ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको प्लगइन स्थापना गर्नु हो, सेटिंग्समा केहि वी मार्क गर्नुहोस्, साइटम्याप सिर्जना गर्नुहोस्, र गुगलमा सर्च कन्सोल मार्फत सुरुवात गर्नुहोस्।
कुनै पनि अन्य प्लेटफर्ममा - यो निर्भर गर्दछ। यदि त्यहाँ प्लगइन इत्यादि जस्तो कुनै बक्स समाधान छैन भने, यो चिच्याउने भ्यागु प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ।
भ्यागुताले सजिलैसँग छविहरूको साइटम्याप उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। एकमात्र समस्या - यो स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुँदैन (प्लगइन विपरीत) र समय समयमा पुनः ताजा हुनुपर्दछ।
तपाईं त्यो कसरी गर्नुहुन्छ?
अनुरोधित साइटको पूर्ण स्क्यान गर्नुपर्दछ र त्यसपछि सफ्टवेयरको शीर्ष मेनूमा साइटम्यापमा जानुहोस् -> छवि साइटम्याप सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईंले प्राप्त गर्ने खोज कोसोल मार्फत प्रयोग गर्न र सुरू गर्नको लागि कोशेर XML फाईल हो।
Photo। फोटो साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्
यदि तपाईं मूल छविहरूको धेरै प्रयोगको घमण्ड गर्नुहुन्छ (चाहे भौतिक छवि वा ग्राफिक तत्व) र छविहरू मुख्य चीज हो वा साइटको कम से कम एक आवश्यक हिस्सा हो भने, प्रयोगकर्ताहरूलाई छविहरूमा सामाजिक साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्न अति उपयोगी छ। नेटवर्कहरू र तिनीहरूलाई त्यसो गर्न सजिलो बनाउँदछ।
सामान्यको रूपमा, मसँग वर्डप्रेस प्लेटफर्मको लागि व्यावहारिक सल्लाहहरू छन्, अन्य प्रणालीहरूमा म प्रोग्रामर प्रयोग गर्ने सिफारिश गर्दछु वा यसको लागि समर्पित प्लगइन छ कि भनेर जाँच गर्दछु।
WordPress यस उद्देश्यका लागि २ राम्रो प्लगइनहरू छन्:
वर्डप्रेस को लागी सामाजिक छवि होभर - सशुल्क प्लगइन (एम्; नेल पॉलिश - $ १))।
Pinterest Pin it बटन - एक प्लगइन जसले साइटमा फोटोहरूमा सानो Pinterest आइकन थप्दछ।
१०. छवि कमी र अनुकूलन उपकरण
TinyPNG - एक उत्कृष्ट सेवा जसले तपाईंलाई तस्विरहरू अनलाइन कम्प्रेस गर्न अनुमति दिन्छ विशेष सुविधायुक्त ड्र्याग इन्टरफेसको साथ। उनीहरूसँग एपीआई पनि छ जसले तपाईंलाई ठूलो परिमाणमा र स्वचालित रूपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ, र WordPress मा एक महान प्लगइन जसले तपाईंलाई साइटमा सबै छविहरू संकुचन गर्न अनुमति दिन्छ - तिनीहरूको एपीआई को उपयोग आवश्यक छ (प्रति महिना images०० छविहरूको लागि निःशुल्क)।
Fotosizer - राम्रो डेस्कटप सफ्टवेयर जसले तपाइँलाई ठूलो मात्रामा छविहरू सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ - केवल सression्कुचन मात्र होइन तर आयाम घटाउने, छविहरूमा वाटरमार्कहरू र विभिन्न प्रभावहरू थप्दै र अन्य धेरै राम्रा सुविधाहरू।
तपाईले भर्खर एक वेबसाइट को छविहरु अनुकूलित को महत्व बुझ्नुभएको छ। जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो साइटको हालको अवस्था जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई सित्तैमा गर्न सक्नुहुनेछ, Semalt को धन्यवाद SEO परामर्श।
Semalt तपाईंको साइटसँग सम्बन्धित SEO समस्याहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, Semalt विशेषज्ञहरूको साथ तपाईं सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ तपाइँको अनलाइन व्यवसाय को प्रदर्शन सुधार गर्नुहोस् कम लागतमा।